Zvirinani Kusvika kune Imwe Yakakwira Yegore Kubuda muna 2016
ne admin pane 18-03-12
2016 nderimwe gore rekukohwa reNani Motokari, nekuda kwevatengi 'rutsigiro uye Vashandi vari nani' vanoshanda nesimba. Tiri kuwedzera kukura uye kufambira mberi gore rega rega. Kuburitswa kwegore negore muna 2016 kuri mamirioni 2.9 seti, mazana mana emazana emazana emakumi mana akawedzera zvichienzaniswa nemaseti emamiriyoni 2.45 muna 2015. Mugore Idzva 2017, ticharamba tichipedzisa ...
Injiniya Li Dongwei anobva kuOhio State University USA akashanyira Shandong Zvirinani Motor Co, Ltd.
Musi waJune 8, Electric Engineering uye kushandisa michina Injiniya Li Dongwei kubva Ohio State University USA akashanyira Shandong Better Motor Co., Ltd. Li Dongwei, postdoctoral muongorori kubva zvemagetsi sainzi rabhoritari muOhio State University USA, uyo ane mbiri chiremba madhigirii makuru emagetsi engineerin. ..
Iyo projekiti timu yeruzivo masisitimu enjiniya chirongwa muYakanakisa mota yakavambwa
Musi waJune 26, iro chirongwa cheboka reruzivo masisitimu enjiniya chirongwa mu Better Motor yakavambwa. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co, Ltd iri pamusoro pekugadzira uye kushandisa chirongwa ichi. Izvo zvakarongerwa kuita kuyedza oparesheni pakupera kwaSep.Zvino Sanjing Electric Injiniya ...